रोचक घतना – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : एउटा गरिब किसान र उसकी बूढी आमा एउटा पहाडको फेदीमा बस्थे । अन्न उब्जाउनको लागि उनीहरू-संग एउटा सानो टुक्रा जमिन थियो र उनीहरू विनम्र, शान्त र खुसी थिए । उनीहरू बस्ने साइनिंग प्रान्तमा एउटा निरंकुश राज्यपालले शासन गर्थ्यो जो वृद्ध मानिस`हरूको स्वास्थ्यव`स्था र कमजोरी देखेर कायर जस्तै गरी डराउँथ्यो । यसले गर्दा एकदिन उसले एउटा कठो|र घोषणा गर्यो । उसले पूरै प्रान्तका बूढाबूढी`हरूलाई तुरुन्तै मारि`दिनू भन्ने व्यहोराको आ`देश दियो । वास्त`वमा त्यो बर्बरिक काल थियो र बूढा-बूढीहरूलाई म`र्नको लागि एक्लै छाड्नु सामान्यनै थियो । गरिब किसानले भने आफ्नी आमालाई तनमनका साथ माया गर्थ्यो र यस्तो कठो`र हुकुम सुनेर उसको मन वे`दनाले भरियो । तर कसैले पनि राज्यपालको आदेशलाई नकार्न सक्दै`नथ्यो । त्यसैले उक्त नौजवानले आफ्नी आमा`लाई त्यो समयमा सबैभन्दा दयालु मानिने मृ`त्यु दिनको लागि तयारी गर
Sapana Sanjal : एजेन्सी । भारतको गाजीपुर स्थित गंगा नदीमा मंगलवार निकै अनौठो घटना भयो । गंगामा एउटा काठका बाकस बग्दै आएको थियो । त्यो काठको बाकस अचम्मको लागेर डुंगा चलाउनेले बाकस वाहिर निकाले । जव उनले बाकस भित्र नवजात शिशु देखे डुंगा चलाउने ब्यक्तिको होस उड्यो । बाकसमा एउटा कागज पनि थियो । जसमा बालिकाको जन्मकुण्डली पनि राखिएको थियो । बाकसलाई भगवानको तस्बिरहरुले सजाइएको थियो भने बालिकालाई पनि भगवानहरुमा चढाउने चुनरीमा राखिएको थियो । ति डुंगा चलाउने ब्यक्तिले बाकस लिएर घर गए । उनले ति बालिका आफैले पाल्न चाहेका थिए तर कसैले प्रहरीलाई खबर गरिदियो । खबर पाउने बित्तिकै पुलिस तुरुन्त त्यहाँ पुगे र बालिकालाई आशा ज्योति केन्द्रमा लगे । अहिले बालिका पूर्णरुपमा स्वास्थ्य भएको बताइएको छ । दादरी घाटमा बस्ने नाविक गुल्लू चौधरीले बालिकालाई नदीमा फेला पारेका थिए । उनले मंगलबार साँझ नदीको किना
Sapana Sanjal : नायिका एवम् तृणमूल कांग्रेसकी सांसद नुसरत जहां गर्भवती भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । बधाई दिनुको साटो नुसरत गर्भवती भएको खबरमा प्रश्न उठिरहेको छ । वास्तवमा पछिल्लो केही महिनादेखि नुसरत र उनका श्रीमान् निखिल जैनको सम्बन्धमा खटपट भएको चर्चा थियो । खबर यो पनि थियो कि नुसरतको अभिनेता यश दासगुप्तासँग अफेयर चलिरहेको छ । अब नुसरत गर्भवती भएको खबरमा लेखिका तसलिमा नसरिनले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकी छिन् । तसलिमा नसरिनले फेसबुकमा एउटा पोस्ट सेयर गरेकी छिन् । उनले नुसरतलाई श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सल्लाह दिएकी छिन् । तसलिमाले आफ्नो पोस्टमा लेखिन्, ‘नुसरतको खबर चर्चामा छ । उनी गर्भवती छिन् । उनका श्रीमान् निखिललाई यसबारे केही थाहा छैन । यी दुई पछिल्लो ६ महिनादेखि अलग बसिरहेका छन् । तर अभिनेत्री नुसरत यश नाममा अभिनेतासँग प्रेममा छिन् ।’
Sapana Sanjal : संसद् विघटन गरेको भनेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने क्रममा काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघका नेता नवराज त्रिपाठीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले सञ्चालन गरेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ‘गोबर उपहार’ आन्दोलन क्रममा नेता त्रिपाठीलाई प्रहरीले नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो। त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्वीरमा गोबर छ्याप्दै प्रदर्शन गरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरले जनाएको छ । उनलाई हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त, बानेश्वरको हिरासतमा राखिएको छ । यसैबीच, त्रिपाठीलाई विनाशर्त रिहाइ गर्न नेविसंघ महामन्त्रीद्वय दीपक भट्टराई र बलदेव तिमल्सिनाले माग गरेका छन्। ‘मध्यरातमा संविधानको चीरहरण गरेको प्रतिगामी कदमको विरुद्ध प्रतिकात्मक विरोधस्वरूप प्रतिगमनका मतियार, दिमागमा गोबर भरिएका वि
Sapana Sanjal : धेरै वर्षअगाडि हराएको एउटा मूल्य’वान औंठी एउटा गाजरले लगाएको भेटिएपछि औंठी मालिक चकित परेकी छिन् । १६ वर्ष पहिला म्यारी ग्राम्सले क्या’नाडाको अल्बर्टामा आफ्नो बगैंचामा ही’राको औंठी हरा:एका थिए । यो सन् २००४ को कुरा हो र अहिले मेरीको उमेर ८४ वर्ष छ। क्यानाडा डेलीको समाचार’अनुसार, यति धेरै समय बितेपछि उक्त औंठी फेला पर्ने आशा समाप्त नै भइसके’को थियो । तर, केही समय अगाडि उनले उक्त औंठी आफ्नै बगैंचामा एउटा गाजरसँगै फेला पारिन् ।मेरीले औंठी हराएको कुरा अहिलेसम्म लुका’एरै राखेकी थिइन् । ह’राएको घटनाका बारेमा मेरी आफ्ना पतिसम्मलाई पनि ब’ताएकी थिइनन् । तर, उनका छोरालाई यसबा’रेमा थाहा थियो । मेरीकी बुहारीले बगैं:चामा गाजर उखल्दा उक्त रहस्य’बाट पर्दा हट्न पुग्यो । वर्षौंसम्म माटोमा रहेको औंठी गाज’रमा फसे’को अवस्था’मा भेटियो । त्यसरी निकै:अघि हराए’को औंठी भि’त्र पछि लगाएको गाँजर
Sapana Sanjal : काठमाडौं । समय समयमा विश्वभरि धेरै अनौठो भिडियोहरू भाइरल भइरहेका हुन्छन् । अचानक भाइरल हुने भिडियोहरु देखेर मानिसहरु छक्क पर्छन् । त्यस्ता केही भिडियोहरू छन् जसले विश्वास गर्न गाह्रो बनाउँदछन् । त्यस्तै एउटा भिडियोसामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । यस्तो घटना कसरी हुन सक्दछ भनेर सबै हैरान छन् । यस भिडियोमा, मुसाहरु आकाशबाट वर्षा भइरहेको देख्न सकिन्छ । यो भिडियो ट्वीटरमा गज्जबले भाइरल भइरहेको छ । मानिसहरूले यस भिडियोलाई हेरेर टाउको समातेका छन् । यो भिडियो पनि धेरै डरलाग्दो हुनुपर्दछ । साथै, यो धेरै धेरै चर्चाको विषय पनि बनेको छ । भिडियो एबीसी पत्रकार लुसी थाक्रेद्वारा साझा गरिएको थियो । जुन अब अत्यन्तै भाइरल भएको छ । यस भिडियोमा यो स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ कि मुसाहरुको आकाशबाट वर्षा हुँदैछ । यसमा, आकाशबाट खसिरहेको मुसाहरु भुइँमा खस्ने बित्तिकै दौडिएको देखिन्छ ।
Sapana Sanjal : एजेन्सी । एउटा मानिसले एक पटकमा कतिवटा बच्चा जन्माउन सक्ला ? २, ३ वा ४ ? तर इन्डियानामा ४२ वर्षकी मारिया हर्नान्डेज नामक महिलाले एकैपटक ११ बच्चाहरुलाई जन्म दिएर विश्वलाई नै चकित तुल्याइदिएकी छिन् । मारिया हर्नान्डेज नामक महिलाले १७ मिनेटमा ११ बच्चालाई जन्म दिएकी हुन्। यो डेलिभरीको केस हेरेपछि अस्पतालको सबै डाक्टर अचम्ममा परेका छन् । मारिया हर्नान्डेजको डेलिभरिको लागि धेरै दुखाई भएपछि मात्रै अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । मारियाको परिवारले यसलाई एक चमत्कार मानेका छन् र सबै बच्चा स्वस्थ भएको कुरालाई लिएर धेरै नै खुशी छन् । मारियाका पतिले यसलाई एक चमत्कार मानेका छन् र अहिले धेरै मानिसहरु उनलाई बधाई दिन थालेका छन् र उनले पनि शुभेच्छुकलाई आभार प्रकट गरेका छन् । यस्ता घ टना विश्वमा निकै नै विरलै मात्रामा घट्ने गर्छन् ।
Sapana Sanjal : चितवन : माडीमा माछा बोक्ने गाडीले पानी ट्यांकीभित्र लुकाउँदै मान्छे ओसार पोसार गरेको भेटिएको छ । माछा ढुवानी सेवा लेखिएको ना.४ च. ८१४४ नम्बरको बोलेरोमा ३ वटा ड्रम लोड गरी त्यसभित्र ६ जना मानिसहरु लुकाई माडीतिर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा शसस्त्र प्रहरी बल छरछरेको टोलीले रीउ पुलमाथि भेटेको हो । गाडी साहु र त्यसका ड्राइभर बोलेरो गाडीको अगाडि बसेको तथा अन्य ६ जना ड्रमभित्र लुकेको अवस्थामा भेटिएका थिए । प्रशासनले जरुरी सेवा क्षेत्रमा सुचिकृत गरी माछा ढुवानी समेतलाई निशेधाज्ञाको अवधीमा चल्न दिने बनाएकोमा त्यसलाई दुरुपयोग गर्दै मानिसहरुकै अवान्छित ओसार पोसारमा संलग्न रहेसंगै गाडीमा सवार सबै ८ जनालाई शसस्त्र प्रहरीले ‘भाटा लगाउँदै’ भरतपुरतिरै फर्काइदिएको छ । यो पनि, जीप दुर्घटना, दुईको मृ,त्यु कर्णाली राजमार्गस्थित दुल्लु नगरपालिका–३ सियालामा जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्
Sapana Sanjal : उदयपुर – . टिकटक नेपालमा त्यति नै चर्चित र लोकप्रिय छ, जति फेसबुक । टिकटकको यो लोकप्रियता झन् बढ्दो छ । ‘लकडाउन’ले घरभित्रै रहँदा धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि टिकटक समय गुजार्ने रमाइलो माध्यम पनि बन्यो । यसको लोकप्रियता त्यसयता चुलिएको छ । अझ महत्त्वपूर्ण त्यसले विश्वलाई टिकटक एपबारे परिचित गराइदियो। त्यसयता टिकटकले करोडौँ जागरुक, सिर्जनशील तथा अधिकांश युवा उमेरका प्रयोगकर्ता पाएको छ। यसै क्रममा टिकटक बनाउने क्रममा भीरबाट खसेर एकजनाको मृ,त्यु भएको छ । कटारी नगरपालिका–११ हर्देनी भीरमा टिकटक बनाउने क्रममा ल’डेर धरान-५ का १८ वर्षीय सुवास परियार मृ,त्यु भएको हो । धरानबाट ओखलढुङ्गाका लागि छुटेको सुमोमा चढेका उनी हर्देनीमा गाडी बिग्रिएपछि ओर्लिएर भिरमा टिकटक बनाउन थालेका थिए । टिकटक बनाउने क्रममा उनी भिरबाट ल’डेर ग’म्भीर घाइते भएका थिए । गम्भीर घाइते भएका परियारलाई